Smudged ibhulukwe eziyizintandokazi zakho upende, abantu abaningi ngephutha sikholelwe ukuthi kungenziwa ngokuphepha ilahlwe. Abahlupheka kakhulu wabo unquma ukwenza izikhindi, uma ibala ukuphakama kuyivumela. Kodwa, kholwa kimi, lokhu indlela olukhulu kakhulu, ngoba ekuqaleni ukuze ufunde kabanzi mayelana nendlela ukususa upende jeans. Kulokhu, ungalilahli ithemba uma une akwenzekanga lutho okokuqala, kubalulekile ukuhlola izindlela eziningana.
Ngakho, enye yezindlela ezivamile kanjani ukususa upende jeans, ukusetshenziswa ekhethekile yokuhlanza ejenti. Thela endaweni eyodwa etholakalayo asesandleni sakho kumakhemikhali awuketshezi: kuhambisana, isibonelo, ethandwa phakathi abasebenzi esitolo inombolo uketshezi 646. Shiya jeans imizuzu engu-20 kuphela, ngezinye izikhathi kuphela ngobumnene ukusula ibala ngendwangu zombili, kakhulu ofakwe ngemoto efanayo. Khona-ke udinga ibala egqwalile ngamanzi afudumele futhi yokuwasha noma remover ibala ukuthi kufanelekile umbala izinto, ungesabi ukukuthinta ngokucophelela endaweni ngopende. By the way, udinga ukusebenzisa le ndlela kuphela fresh, hhayi okwamanje omisa izindawo.
Ngokufanayo, ungakwazi zama ukusula pair oluthandayo jeans usebenzisa uphethiloli, iziketekete imimoya uyat, turpentine. Ngamunye wabo usetshenziselwa diluting likayinki ukuhlanza evele of it. Uma noma iyiphi yezindlela uhlanzekile ngenhla kuyinto efiselekayo donsa kakhulu Ukhuphula izinkungu, futhi into ukuhlanzwa kumelwe futhi wageza izikhathi eziningana ukuze uthole ngokuphelele lahlani nephunga.
Kodwa ukusetshenziswa kumakhemikhali awuketshezi - akuyona indlela kuphela ukususa jeans upende. Uma uzama ukusula indlela kakade omisiwe e amabala, umphumela ziyokonakalisa into: endaweni yayo ngeke halo, okungadingi ngokuthini. Upende lukhuni ku jini izinto ungazama ukususa ngommese noma insingo, kufanele athathe isinyathelo ngokucophelela, ngokuzama ukuba singabonisi kulimaze lendwangu. Kodwa kubalulekile uzilungiselele ukuqinisekisa ukuthi indwangu uyobheka abashaywayo ngaphezulu indawo wokuhlanza.
Phela, uma izinto ezingcolile ngamafutha upende ungenalo ngisho ukuba ukugijimela esitolo ngoba kuphela, ngoba kukhona indlela ngempela elula futhi ethandwa ukususa upende kusukela jeans: kwanele ukusula ibala ngokucophelela nge swab ukotini oswakanyiswe ngamafutha sunflower evamile. Movement kufanele zibhekiswe kude imiphetho ibala maqondana nendawo. A esukela uwoyela kufanele kube lula ukuze ususe noma ikuphi degreaser, isibonelo, iqiniso lokuthi ngokuvamile ngokuwasha izitsha.
Uma unesithakazelo ekususeni amabala kusukela izinwele udayi, ngalesosikhathi you azi ukuthi Hardware ezitolo adayise insipho ekhethekile zokususa amabala. Ngosizo lwakhe, esingaziletha upende fresh. Okudala ukungcola behla benyuka kuyodingeka isikhathi esijana: ugcwalise endaweni ka-3% isixazululo i-hydrogen peroxide, noma 9% uviniga. Shiya okungenani isigamu sehora, bese umane ugeza entweni umshini wokuwasha.
Kodwa uma ungafuni ukuba azifake engozini, khona-ke kungcono ukuba baphathe jeans kuya ilondolo. Kube ukuthola ngokunembile ukuthi isimo yokungcola neminingi Anokubutha indlela engcono kakhulu ukuyihlanza. By endleleni, uma usunesikhathi ngokukhethekile wathenga upende ukuze jini, futhi ziye zabangela isithombe sakhe ngandlela-thile urkasit jeans zakhe, ungakhohlwa ukuxwayisa umhloli wokuhlanza ukuthi emaphethini kufanele ahlale phezu indwangu.
Zangaphansi Thermal izingane: ukubuyekezwa. zangaphansi Thermal izingane Norveg
Kuyini briefs amadoda ezithakazelisayo sika nge gags?
9 izingubo ungalokothi emfashinini
I-Holy Trinity Cathedral, e-Ekaterinburg: incazelo, umlando, u-rector
Kwok ukwenza izandla zabo
Kuyini lwemithombo? Lapho ukuthenga lwemithombo? Malt iresiphi isinkwa
"Voltaren" - usimende, khulula iqolo, ubuhlungu bemisipha namalunga. Yokusetshenziswa